🥇 ▷ - ▷ Sharafta 9X ee Flame cas / Flame midabka cas hadda waa la heli karaa »- ✅
– ▷ Sharafta 9X ee Flame cas / Flame midabka cas hadda waa la heli karaa »-
Qalabka cusub ee ‘Honor 9X’ iyo qalabka ‘9X Pro’ wuxuu noqday mid rasmi ah bishii Luulyo. Sharafta 9X waxaa lagu soo bandhigay seddex xulasho midab, sida Magic Night Madow, Charm Sea Buluug iyo Flame Cas (Flame Red). Shirkadda ‘Honor 9X’ waxay diyaar ku ahayd iibsiga ilaa iyo 30-kii July Shiinaha. Si kastaba ha noqotee, moodalka gudaha Midabka Guusha Cas / Flame Cas wali lama helin. Liis gareeyaha Vmall ee barnaamijka ‘Honor 9X’ wuxuu muujinayaa in daabacaaddiisa Flame Red ay ku bixi doonto 10:08 a.m. (waqtiga maxalliga ah) Shiinaha.
Sharafta 9X ee Flame Cas / Flame midab cas oo hada laga heli karaa Shiinaha
Sharafta 9X Flame Red waxaa laga heli doonaa seddex nooc oo kaladuwan oo ah xulashooyinka kale ee midab. Moodooyinka ayaa tirin doona Iyada oo leh 4 GB oo RAM + 64 GB oo kayd ah, 6 GB oo ah RAM + 64 GB oo kayd ah iyo 6 GB oo ah RAM + 128 GB oo kayd ah. Kuwaani waxay leeyihiin qiimo dhan 1,399 yuan (~ 179 euro ama $ 199), 1,599 yuan (~ 205 euro ama $ 227) iyo 1,899 yuan (~ 243 euro ama $ 269).
Faahfaahinta iyo astaamaha sharafta 9X
Honor 9X wuxuu bixiyaa saami sare oo ah shaashadda-ilaa-jirka madaama ay leedahay shaashad aan laheyn feejignaan ama xirmo la’aan. Waxay leedahay guddi 6.59 inch IPS LCD taasoo soo saarta qaraar HD + 1080 x 2340 pixels oo buuxa. Cabbirkeeda dhinaca waa 19.5: 9. Kiriniga cusub ee loo yaqaan ‘Kirin 810 chipset’ oo laga soo saaray 7 nm wuxuu awood u leeyahay howlaha casriga ah. Ka hel tamar a 4,000 mAh batari Waxay u baahan tahay taageero ku dallacsi dhakhso leh. Qalabka MicroSD kaarka waxaa laga heli karaa aaladda si loo ballaariyo kaydinta.
Kaamiradeeda hore waxaa lagu qariyey moodeelka mobilada leh 16 megapixels leh furitaanka f / 2.0. Dhabarka casriga wuxuu leeyahay nidaam laba kamaradood leh oo leh Flash flash. Waxay leedahay lens 48 MP ugu weyn leh f / 1.8 aperture iyo aaladda dareemayaasha 2 MP qoto dheer leh furitaanka f / 2.4. Qaar ka mid ah astaamaha kale ee ‘Honor 9X’ waxaa ka mid ah khudbaddaama faraha laga qaado hal dhinac, dekada USB-C iyo nidaamka hawlgalka ee Android 9 Pie taasi waxay kuxirantahay lakabka sameynta EMUI 9.1.
Macluumaadka sirta ah ee soo ifbaxay wax yar ka dib markii la bilaabay taxanaha taleefanka casriga ah ee ‘Honor 9X’ ee Shiinaha wuxuu sheegtey in taleefanka 9X iyo 9X Pro, iyo sidoo kale barnaamijka ‘Honor Smart Screen’, ay dhawaan ka bilaaban doonaan India. Wali majiro cadeyn rasmi ah oo ku aadan imaatinka aaladaha sharafta leh ee wadanka aan horay u soo sheegnay. Waxaa lagu soo waramayaa in taleefannada 9X iyo 9X Pro ay rasmi ahaan doonaan dhulkaas dhamaadka bishaan ama horraanta Sebtember.
TilmaamahaCordDesignSpecifications Flame RedHonorhonor 9xhonor 9x flame Redhonor 9x Prohonor 9x Pro Redhonor 9x Red Redoror 9x RedhuaweiHuawei Honormodelorojo flamavariante